Mukuchengetedza Brave. Njodzi dzehunyanzvi | Linux Vakapindwa muropa
Mukuchengetedza Brave. Ngozi dzehunhu
Vashandisi vekare veLinux vanorangarira kuti chaive chii kuvhura Internet kusvika makore gumi nemashanu apfuura.
Internet Explorer yakatonga pamusoro pewebhu, uye, Nekuda kwekushaya nguva, kufarira kana bhajeti, ivo vanogadzira vanongonetsekana nekuita kuti mapeji aenderane neiyo Microsoft browser.Pane nyaya pamusoro pemugadziri wevhavha uyo aida kuve semutengi kambani yeNorway iyo yakazogadzira iyo Opera browser. Akarasikirwa nekutengesa nekuti muongorori akawana kuti pese paaiedza kuwana iyo yekugadziriswa webhu interface, aigamuchira yekukanganisa meseji uye zano rekuti aise Internet Explorer.
Vashandisi veLinux vaizviita kazhinji. Mapeji aida kumwe kuomarara aishandisa zvivakwa zveMicrosoft uye kana vakaona kuti uri kushandisa Firefox vakaratidza meseji inouraya.
Panguva iyoyo isu takave nemhinduro mbiri dzisina kukwana. Isa iyo yambotaurwa Opera (yaive neLinux vhezheni) kana chinja marongero ebrowser kuti webhu itende kuti tanga tichishandisa Internet Explorer. Zvisinei, zvaisagara zvichishanda
1 Vana vatsva vanobva munharaunda
2 Ivo vane mukurumbira Mr. Brendan Eich
3 Mukuchengetedza Brave
Vana vatsva vanobva munharaunda
Chirevo chekare cheInternet chinobata icho kune marudzi maviri evanhu; vatengi uye zvigadzirwa.
Microsoft yakaita mari kutengesa marezinesi esoftware uye aive mutungamiri munharaunda iyoyo. Google yaida imwe bhizimusi modhi kana ichida kukwikwidza. Uye, akazviwana mukushambadzira.
Asi, kutengesa kushambadzira iwe unoda kuti vanhu vazvione. Uye, kuti anogona kukwikwidza haakwanise kukudzivirira. Kana Microsoft ikafunga (sekuita kwayakazoita) kupinda mubhizinesi rekushambadzira, zvinogona kukonzera kuti browser rayo-rekuzvimiririra rivharire maGoogle ads kuratidza.
Iyi quasi-monopoly yaifanira kutyorwa. Uye ndipo pakauya Mozilla Foundation neyakagadzirwa chigadzirwa Firefox.
Google yaive kwenguva yakareba mutsigiri wezvemari mukuru weMozilla Foundation. Zvaive zvisingaite kupinda muinjini yekutsvaga pasina kukukurudzira kuti uise Firefox. Chinhu chakazobuda zvakanaka zvekuti Nekufamba kwenguva Google yakafunga kuvhura yayo browser. Chrome.
Kutenda kune simba rakakura rekusimudzira reGoogle, kushaya kwekuita kweMicrosoft, uye iyo Mozilla Foundation kutambisa nguva pane kusiana kwakatadza, Google Chrome yakava iyo nyowani de facto chiyero chemawebhusaiti. Zvakawanda zvakabatsira makwikwi ako kutanga kusangana nematambudziko apo vashandisi vakanyepedzera kushandisa mamwe masevhisi eGoogle senge YouTube, Docs, kana Gmail.
Ivo vane mukurumbira Mr. Brendan Eich
Chekutanga pane zvese, kujekeswa.
Kufanana nevanhu vese, ini ndine maonero pane dzakawanda nyaya. Izvo zvisina chekuita netekinoroji hazvina chekuita mune ino blog, uye, chero zvakabviswa pamusoro pavo izvo zvavanofunga kuita zvichibva pachinyorwa chino, zvirokwazvo vanenge vakanganisa. Ivo vanongoda kuziva izvo Ini ndinotenda kuti rusununguko rwekutaura ikodzero iyo isingafanirwe kudzorwa uye kuti mazano anokuvadza akafanana nemampires. Mukupenya kwezuva vanozviparadza, murima vanokura.
Aifanirwa kusiya basa nekuti mumwe munhu akaziva kuti akange apa mupiro kumushandirapamwe we NO mureferendamu yekubvumidzwa kwemuchato wengochani kuCalifornia Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti hapana kunyunyuta kumwechete kwerusarura kumushandi wevane ngochani uye kuti kusawirirana nemuchato wevane ngochani nekuratidzira nezvenyaya iyi chinzvimbo chakachengetedzwa neMutemo weUnited States.
Nekudaro, Eich aifanira kusiya chigaro uye pane diki asi rinoshanda kwazvo chikamu chenyika yehunyanzvi inomuvenga.
Basa rake idzva raive gadzira yakavhurika sosi bhurawuza iyo inounza pamwe zvinzvimbo pakati pevanogadzira zvemukati nevashanyi. Iyo yekutanga, kuti igadzire zvemukati zvemukati, inoda mari inovatendera kuti vararame. Iwo masekonzi ane mvumo yekufamba pasina kufamba kwavo kuchiteverwa kana kuvhara magweta anotsamwisa.
Akashinga (zvichibva paChromium) inovhara mhando dzese dzekuteedzera uye makuki. Iyo yega yakavanzika modhi inoshandisa iyo Tor network uye kwete chete inovhara kushambadza kubva kune mawebhusaiti, zvakare inokubhadhara iwe kuti uone isingakuvadze kushambadzira kana iwe ukaita sarudzo.
Uye, iyo yekufambisa inomhanya chaizvo uye inotsvedza.
Asi, chinoita kuti chinakidze ndechekuti inokutendera iwe kupa mubairo vagadziri vachishandisa dhijitari chikwama uye yavo cryptocurrency.
Izvi ndizvo zvakaita kuti Mr. Eich sGadzira vavengi vatsva. Makambani anotengesa kushambadzira kweInternet uye makuru evanopa zvemukati. Iwo ekutanga anoziva kuti ad blockers haashande mukufamba kwenguva uye kuti havazi vese vanoziva kuisa imwe. Iwo ekupedzisira haadi chero chinhu chinoisa munhu mabloggi kana madiki midhiya nhepfenyuro zvakaenzana.
Ipapo ndipo pavakagadzira Vashinga vakamonyanisa yakakura uye vanhu vanomuvenga vakabuda kuzomurova.
Mumwe mushandisi akawana kuti riini Ini ndakaisa iyo kero yeiyo cryptocurrency sevhisi, izvi zvakazadzikiswa neyekutumira chinongedzo. Izvo zvakaitikawo nemamwe matatu masayiti muiyo indasitiri.
Eich akapa tsananguro yehunyanzvi.
Takakanganisa, isu tiri kuzvigadzirisa: Shinga nekumisikidza autocompletes izwi rekuti "http://binance.us" mubara rekero kuwedzera kodhi yekubatana. Isu tiri mubatanidzwa weBinance, tinotarisa vashandisi kuburikidza neiyo yekupinda-mubhizimusi widget pane iyo peji nyowani, asi iyo yekupedzesa haifanire kuwedzera chero kodhi ... Iyo yekumisikidza yekupedzisa yakafuridzirwa nekombiki yevatengi yemubvunzo wekutsvaga ivo ivo vese mabhurawuza, asi zvakasiyana nemisoro mikuru yemibvunzo, typed URL inofanirwa kuenda kune inonzi zita duraini, pasina chero chinowedzerwa. Ndokumbirawo uregerere chikanganiso ichi - isu tiri pachena kuti hatina kukwana, asi isu takagadzirisa nzira nekukurumidza.
Ngatitorei zvinhu zvishoma
Kunyangwe uchifungidzira kuti yaive mhosho, pane zvikanganiso zvakapusa zvematsotsi.
Iko kukanganisa kwakaitika nemasevhisi ane Brave ane zvibvumirano zvekubatana.
Iyo yekuendesa kodhi yekuwedzera yakaitwa pakuona nekugadziriswa.
Izvo zvinoitawo kwandiri sekuita semapenzi ematsotsi ndezvekuti vashandisi vazhinji vafunga kusunungura Vakashinga uye mushandirapamwe pakurwisa kuiswa kwayo.. Zvinounzwa neShingi kune vashandisi zvakanyanyisa kupfuura izvo zvinorwadza "binancegate". Kana yavo modhi ikashanda, iwo mukana wevagadziri kuti vagadzire zvemukati zvemukati pasina zvinoenderana nechinangwa cheinjini yekutsvaga. Uye yakeVafambisi vengarava vanomira kuve chigadzirwa kuti vadzokere pakuva izvo zvavanofanira kunge vasina kumbomira kuva. Vatengi kana vashandisi.
Uye, rega ndikutaurire, kana iwe usati wakambove nezano rakakura mumusoro mako pabasa rakakonzera fiasco yakakosha mukuita, imhaka yekuti iwe kana iwe uine kudada kwakakura kupfuura Everest kana vabereki vako vachiramba vachikutsigira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mukuchengetedza Brave. Ngozi dzehunhu
Ini ndaisada kusanzwisisika kwekurehwa kuti ndiende ndakashinga. Handidi akashinga. Iine sarudzo dzakawandisa dzandisingade. Uye anoshandisa nguva yake kugadzira kubatana kumaseva akashinga nguva zhinji, asingakwanise kuzvidzivirira. Uye kubatana kumakero asina kana kero.
Kana ndichida chengetedzo ndinoshandisa firefox ine ghacks-user.js uye vpn. Kana ini ndichida kurerukirwa ndinoshandisa ungoogled-chrome ine vpn. Kana ini ndichida tor network ini ndinoshandisa tor-browser.
Opera inoita zvakafanana nehukama hwehukama kubva kuAmazon uye hapana chakaitika.
Mukupedzisira, aya marudzi emakambani anofanirwa kuita imwe mhando yemhindu kubva kune zvigadzirwa zvavo
Yakanaka browser! Ndicho chandinofarira!
Arturo Alvarez akadaro
Hazvishamise kuti yemahara software blog inotsigira homophobia. Murume uyu haafanire kunge aine kushambadza uye akasununguka. Uye iyi blog yandakatevera, ndatoibvisa kubva pane yangu runyorwa. Zvinosuruvarisa kuverenga izvo. Homophobic blog.
Izvo zvakati, zvinoshamisa zvakare nerima rese iro iro Brave zvine chekuita nekuvimbika kwayo, nekuda kwekukanganisa kuvanzika kwevanhu, pakati pemamwe maitiro akasviba, kuti kune vanhu vanoramba vachizvidzivirira. Vamwe vanhu vanofarira kurovera misoro yavo kumadziro.
Iyi nyowani yerima episode yeBrave imwe nguva nyowani yekusimbisa kushandiswa kweFirefox, kana chero yemahara browser.
Pindura kuna Arturo valvarez
Iyo blog haina kuvhara chero chinhu. Chinyorwa ichi chine siginecha yangu. Uye ini ndakanga ndisina maonero pamusoro pekuvenga ngochani.
Chandinodzivirira ikodzero yerusununguko rwekutaura.
Musikana anopenga uyu aisada kuti Diosito aingoburitsa 2 mhando dzehardware ne firmware yavo. Uye ini ndinoshandisa Internet Explorer kubasa; nekuti iyo system inongowirirana neIE pakati pa2020. Mumba mangu zvirinani, Safari.
Urwu hupi hupombwe? Ini ndinofunga zvirinani kuti unopenga ndiwe. Regai vamwe vave nezvavanoda uye nezvavanofunga. VaEich vane kodzero yekuva nerusununguko rwekusarudza nekutaura zvavanofunga zvinoremekedzwa. Uye iyo blog yakazvikwanira pachayo kurondedzera chokwadi, haina kudzivirira munhu pachayo, inobuda mukudzivirira bhurawuza.
Mumwewo asingashiviriri kuti ivo havamupemberere iye sekushamisika chero gay jerk.
Yakawanda yekupopota "homophobic" kune vamwe kana iye mukomana wacho ari "heterophobic."
Ini ndinopesana nemuchato wevanhukadzi, sezvandiri kupokana nemurume nemukadzi kuroorana, nekuti Hurumende haifanire kuziva kuti munhu akaroora, kugara pamwe chete kana kuparadzana. Chinangwa cheHurumende "kuziva" kana uchigara nemumwe munhu kupindira kune zvakavanzika, uye kukupa iwe zvakati kana zvishoma mutero mabhenefiti nekuti zviri pachena kubiridzira kuita chinhu chimwe kana chimwe. Chimwe chinhu ndechekuti kune vadiki kana vanovimba vanochengeta vabereki, vana, vachengeti, vanochengeta, ...? Zvakanaka, mune izvozvi, chinhu chega icho Hurumende yaifanirwa kunge yakaratidza ndechekuti munhu wega wega anoda rutsigiro anoenderana naye kuti ape iwo mutero zvakanakira uye zvisungo zviri pamutemo kune avo vanofanirwa kuvachengeta. Chero chero data senge bonde, ganda ganda, chinamato, chinzvimbo chemuchato, nezvimwe zvinofanirwa kubviswa. iwo hausi iwo mutoro weNyika.
Chimwe chinhu, haisi kuti Chrome yakatora musika nekuda kwekuregeredzwa kweFirefox, aiwa, Firefox yakatora musika nekuda kwekuregeredzwa kweMS IE, asi Chrome yakatora musika nekuti ine akawanda masystem (nhare mbozha) uye nekuti ndiyo yaive yekutanga kuva nehofisi yayo yese mukati megore, iyo, muchimiro cheiyo sisitimu yekushandisa, inogona kuita mamwe mabasa uye mabhenefiti kana ichionekwa kubva kune yako Chrome browser.
ino inyika yezvinodiwa uye hapana chakakwana zvakakwana zvakakwanira iwe pamwe isu takandinakira ini pc yangu ndine akawanda mabhurawuza opera firefox seamonkey maxthon uye iwe uchayera nekuti kunze kwekunge google pasina tekinoroji yakakwana kana chirongwa kana ini dont know Ivo vanogona kukatanura kugadzirisa kana kugadzirisa saka Shinga iri rakanakisa bhurawuza ine nzira nyowani yekundivhurira, bhurawuza rega rega rakanakisa, ndinonakidzwa nehunhu hwekubhurawuza, havana kukwana, ini ndozviziva uye izvo zvinoita kuti zvinyanye kunakidza asi unogona kuzvishongedza nechako chikumbiro chaunofarira zvakanyanya uye uchaona kunaka kwazvo kwazvinoita
Network Security Toolkit 32-11992 inosvika neKernel 5.6.15-300, base Fedora 32 uye nezvimwe
Peppermint 11 iri kusimukira, kunyangwe parufu rweiye CEO. Ichatsigirwa kusvika muna 2025